Myanmar Post Telecommunication - MPT - Facebook Page Review - LikeAlyzer
Review of Myanmar Post Telecommunication - MPT
Page Information Pagename: Myanmar Post Telecommunication - MPT [Visit]
Username: Myanmarposttelecommunication You have registered your username. Good!Usernames allow you to easily promote your business, brand or organization's presence on Facebook withashort Page address.
Myanmar Post Telecommunication - MPT
Top5Posts by Myanmar Post Telecommunication - MPT
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူကြပါ. . xP (Photo Credit to owner~ )...
အားလုံးပဲ မင်ဂါ နက်နံခင်းပါလို့ .. :P
အော်ရင်း ဟစ်ရင်း နဲ့...
ခစ်ခစ် .. :P
အဲ့လိုလဲ ဟုတ်ပါဘူးနော် ... ဟိုအရင်ရွှေခေတ်တုန်းက ဆို...
ဘာလို့ နှေးတဲ့ ကိစ္စဆို MPT ပဲခလုတ်တိုက်နေကြတာရဲငင် .. :P
တားတို့ MPT လဲ...
အထင်မမှားကြပါနဲ့ခင်ညာ .. လူကြီးတွေ သုံးရင်း တရားမှတ်လို့ ရအောင်...
Unanswered Posts by Others - Myanmar Post Telecommunication - MPT
foreign msg အ၀င်မခံတဲ့ mpt ကို အ၇မ်းမုန်းတာပဲ မေမေ :'(
ဘာလို. အ၀င်မခံ၇တာလဲဂျာာ :/
မက်ဆေ့ခ်ျ တွေပို့တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေ မရောက်ပါ ပိုက်ဆံကျတော့ဖြတ်တယ်...ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ
စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ internet connection က...